Maamulka Ganacsiga & Suuqgeynta | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 3
Afsoomaali ahaan marka loo fiiriyo eraygaan “mass communication” waxaan ku macneeyay “xariirka warbaahinta”. Wakhtiyaddii aan bilaabay inaan wax ka qoro arrimaha maamulka, ganacsiga, dhaqaalaha, suuq-yada dunidda iyo dhammaan qoraaladda ku saabsan cilmiga siyaasadda iyo diplomaasiyadda waxaan wajahay oo aan u baahday eray bixin badan. Madamaa aan helin cid iga saacido Afsoomaali ahaan erayadaasi waxaan iskudayay inaan isticmaallo waxwalbo oo aan ka heli karo erayadda macno ahaan Afsoomaali. Waxaa waqtiyo badan dhacday in erayadda qaar Afsoomaali ahaan aan ku waayay, waxaana ku qasbanaaday inaan aniga u sameeyo erayo ku macno dhaw. Luuqad walbo waxaa ku jiro erayo oo aysan asal ahaan …
Erayga istaraatiji asal ahaantiisa wuxuu ka yimaaday dalka Gariiga “strategos” oo macnihiiisu yahay guud ahaan ama guud. Macno ahaan erayga waxaa loo isticmaali jiray jihada militariga, balse maanta waxaa loo isticmaalaa qaababka istaraatijiyada qaab ganacsi. Taasi oo qeexayso sidda ganacsigu uu ku gaari karo hadafyadii loo aas-aasay. Anaga Soomaali ahaan eraygaan xagguu noogu yimid? Haddii aad tahay shaqsi ka akdhaw meelaha ururada ganacsiga, kuwa maxaliga iyo dowligaba amaba haddii aad tahay arday dhigto jaamacad oo kuliyadiisana tahay kuliyadaha ku salaysan maamulka, ganacsiga, IT iyo dhaqaalaha waxaad in badan maqashaa oo dhagahaaga kusoo dhaco eraygaan istaraatiji. Xittaa waxaa marmarka qaar, …
Hal-ku dhig waa erayo la isku geeyay oo loo isticmaalo suuq-gaynta. Erayada hal-kudigga waa inay noqdaan erayo si fudud loo xasuusani karo. Dhammaan shirkadaha waa weyn waxay leeyihiin erayo halku-dhig. Haayadaha noocyadeeda kala duwan waxay leeyihiin halku-dhigyo u gaar ah. Waxaan soo qaadani doonaa tusaalooyin kala duwan si aan wax badan ugu fahano wuxuu yahay erayada halku-dhigyada ah. Taariikhda erayga halkudhiga Halkudhiga waxaa luuqada ingiriiska lagu yiraahdaa “slogan” waa eray soo jiraan ah, asal ahaantiisana wuxuu ka soo jeedaa Scottish Gaelic iyo Irish oo ah sluagh-ghairm “sluagh-ghairm waa labo erayo oo la isku keenay waxayna u kala taaganyihiin sidda sluagh “ciidan”, “ciidankii” …
“Maamul xumada waa dhibaatooyin ay ka wada simanyihiin dhammaan caalamka oo idil. Dhibaatooyinka maamul-xumada waxaa loo baahnaa inay hoos u dhacdo madamaa dunidda horumar gaartay. Iyadoo dunidda horumar la taabani karo laga gaaray wali waxaa jira aqqoondari dadka dunidda ka haysato maamulka wanaagsan.” Inkastoo maamul-xumada aynu kawada simanahay dunidda oo idil, hadana waxaa loo baahanyahay inaan ku dadaalno siddii aanu u fahmi lahayn maamulka wuxuu yahay. Marka horre waa maxay maamul? Maamul waxaa luuqada Ingiriiska lagu yiraahdaa “management” carabiga waxaa lagu yiraahdaa إدارة. Marka loo fiiriyo/eego qaabka akaademiga waxaad ka fahmaysaa in maamulku yahay barashada bulshada, aragtida bulshada, siyaasadda, iyo …
Niyad-samida – eraygaan Afsoomaali ahaan dad badan wey fahmi karaan waxa lagala jeedo niyad-samid. Balse macnaha ay jumladaan ugu jirto waa maxay? Macanaha guud ay jumlada ay ugu jirto ayaa ka duwan macnaha Afsomaaliga ee aad ugu malayni karto. Macnaha guud ee ay xambaarsan tahay ayaa ah ’shirkadaha waxay gaaraan heer loo yaqaano niyad-samid. Marka aan leeyahay niyad-samid, ma ahan eray aan horey afka Soomaaliga aan kusoo bartay ee waa eray aan isleeyahay wuu ku macno dhawyahay eraygaas cilmiyanka ah ee aad horey u taqaanay. Eraygaasi afka ingiriiska waxaa lagu yiraahdaa ’Goodwill’ – ’niyad-samid. Shirkadaha marka ay si wanaagsan ulla …
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad u baahantahay inaad barato haddii aad doonayso inaad noqoto ganacsade. Inaad noqoto ganacsade waa wax iska fudud, balse waxaa adkaani karayso inaad fahanto qaababka ugu wanaagsan aad ku maamuli karto ganacsigaada. Dadka qaar waxay leeyihiin awood ay ku noqoni karaan ‘Ganacsade’ balse ma ogsoona inay leeyihiin awoodaas, sawabtana waxaa keenay aqqoonta ay u leeyihiin nafsadooda ayaa ah aqqoon aan sidaas usii badneen. Waa wax aad u wanaagsan inaad nafsadaada aqqoon fiican u leedahay. Balse waxaan kuu sheegayaa inaad noqoni karto ganacsade. “Ogaaw marka aad tahay ganacsade hawsha aad bulshada u hayso waa hawl muhiim …
Inta badan waxaad moodaa inay iskumid yihiin maamule iyo hogaamiye. Balse adiga ma qabtaa aragtidaas? Ma waxay kulla tahay inay isku mid yihiin maamulnimada iyo hogaamiye nimada? Caadiyan waxaa jira ururo badan sidda kuwa jaamacaha, haayadaha, dowladaha, qoraayaasha, iyo kuwa cilmi baarista ku sameeyo arrimaha la xariira mawduucaan waxay sheegaan inay kala fog-yihiin farqiga u dhaxeeyo hogaamiye iyo maamule. Ulla jeedka maqaalkaan ayaa ah inaan kala saarno farqiga u dhaxeeyo hogaamiye iyo maamule. Waxaan jeclaani lahaa inaan waxwalbo ku sharaxno afkeena hooyo ‘Af-soomaali’, si cidwalbo ay u fahmi karto waxyaabaha aan qoraayo, balse waa muhiim meelaha qaarkiisa oo aan isleeyahay …
Qorshaha suukh-gaynta waa qayb ka mid ah qorshaha ganacsiga ‘’business plan’’. Marka la qoraayo qorshaha guud ee ganacsiga waxaa loo baahan yahay in si gaar ah diirada loo saaro qorshaha suukh-gaynta. Sawabtoo ah qorshaha suukh-gaynta waa laf-dhabarka ganacsiga, waxayna si fiican u qeexdaa ama faah-faahisaa qaababka lagu horumarini lahaa shirkada. Maxaa yeelay shirkada waxa kali oo si fiican u horumarini karo waa inay hesho macaamiil ku filan. Si loo helo macaamiil badan oo ay shirkada yeelato qorshaha suukh-gaynta waa in si fiican loo qeexaa. Qorshaha suukh-gaynta waa in laga helaa qaab lagu fahmi karo in la leeyahay rajo lagu kasbani …